FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA WOLFHOUND IRLANDEY - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Wolfhound Irlandey
Wolfhounds Irlandy olon-dehibe
Ny Irish Wolfhound dia alika goavambe, iray amin'ireo karazany avo indrindra eran'izao tontolo izao, mahatratra ny haben'ny pony kely iray. Lava ny loha ary tsy malalaka loatra ny karandohany. Lava ny somotra ary somary manondro. Entina miverina amin'ny loha ny sofina kely rehefa milamina ny alika ary voatsindrona amin'ny ampahany rehefa faly ilay alika. Lava, matanjaka ary arched ny hatoka. Mivelatra sy lalina ny tratra. Mihantona ilay rambony lava ary somary miolakolaka. Lava sy mahery ny tongotra. Boribory ny tongotra, misy rantsantongotra voakolokolo tsara. Ny palitao marefo sy marefo dia somary henjana amin'ny loha, vatana ary tongotra lava kokoa noho ny maso sy eo ambanin'ny valanoranony. Ny loko palitao dia misy volondavenona, brindle, mena, mainty, fotsy madio na volondavenona, ary ny volondavenona no be mpahalala indrindra.
Wolfhounds Irlandey dia malemy fanahy, manam-paharetana, tsara fanahy, mandinika ary tena manan-tsaina. Ny toetran'izy ireo tsara dia azo atokisana amin'ny ankizy. Vonona sy maniry ny hampifaly azy ireo izy ireo ary tsy mivadika amin'ny tompony sy ny fianakaviany. Matetika izy ireo miarahaba ny olona rehetra ho toy ny namana, koa aza miantehitra amin'ny maha mpiambina azy ireo, fa mety ho mpanakana noho ny habeny. Ity karazana goavambe ity dia mety ho sanganehana ary miadana ny fahamatorany amin'ny vatana sy ny saina, maharitra roa taona eo ho eo alohan'ny hahalehibe azy ireo. Na izany aza, mitombo haingana izy ireo ary tena ilaina ny sakafo avo lenta. Na dia zava-dehibe aza ny fakana alikaola mitombo mandeha isan'andro ho an'ny fahasalaman'izy ireo ara-tsaina dia tsy tokony terena ny fampihetseham-batana ary mety handoa hetra loatra amin'ny vatan'ity alika ity raha mbola tanora. Ampianaro tsy misintona ny tadiny alohan'ny hitomboany matanjaka. Ny Wolfhound Irlandey dia somary mora ny manofana. Mamaly tsara ny hentitra izy, nefa malemy paika, tsy miovaova, mitarika . Ity fomba fiasa ity miaraka amin'ny be dia be fahatakarana canine handeha lavitra satria io alika io dia mahazo haingana izay kasainao. Hamarino tsara fa omena fahatokian-tena betsaka araka izay tratra ny alika tanora ary mifanaraka hatrany amin'izany ianao, ka hitombo ho alika mitovy sy azo antoka. Mifanaraka tsara amin'ny alika hafa ity alika milamina ity. Marina koa izany amin'ny biby hafa .
Hahavony: 28 - 35 santimetatra (71 - 90 cm)
Milanja: 90 - 150 pounds (40 - 69 kg)
sarin'i coton de tulear
Ny Wolfhound Irlanda dia afaka mahatratra hatramin'ny 7 metatra ny halavany rehefa mijoro amin'ny tongony aoriana izy.
Mora voan'ny aretim-po, taolana cancer , bloat , PRA, Von Willebrands, ary hip dysplasia.
Ny Wolfhound Irlandey dia tsy atolotra ho an'ny fiainana an-trano. Tsy mihetsika izy io ao an-trano ary hahavita tsara indrindra amin'ny tokotany lehibe farafaharatsiny. Karazana goavambe ity izay mila toerana malalaka. Mety tsy mifanaraka tsara amin'ny fiara kely na kely izy io.
Mila tafiditra ao amin'ny fianakaviana izy io ary tsy ho faly amin'ny trano fitehirizana. Amin'ny maha-mpitsangatsangana azy dia hanenjika izy ary mila faritra azo antoka sy mimanda hanaovana fanatanjahan-tena.
Ireto alika goavambe ireto dia mila toerana malalaka handehanana, fa tsy mila fanatanjahan-tena intsony noho ny karazany kely kokoa. Mila isan'andro izy ireo MANDEHANA toerana anaovan'ny alika voditongotra eo anilany na ao ambadiky ny olombelona mitazona ny firaka. Tsy eo anoloana mihitsy. Tahaka ny karazana goavambe goavambe hafa dia zava-dehibe ny mahatadidy fa ny fampihetseham-batana mahery vaika dia tsy tsara amin'ny fitomboan'ny alika sy ny fivoaran'ny alika tanora, koa tandremo ny alikanao raha misy famantarana, fa mbola mila mandeha an-tongotra isan'andro izy ireo.
6-8 taona eo ho eo
Miovaova eo amin'ny alika kely 2 ka hatramin'ny 12 ny alika kely
mena pitbull orona sy ny mpanao ady totohondry Mix
Ny palitao lava sy salantsalany dia mila fikarakarana tsy tapaka sy feno miaraka amin'ny borosy sy sisiny. Izany dia mitazona ny palitao amin'ny toe-javatra tsara. Indray mandeha na indroa isan-taona dia esory ny palitao mba hanesorana ny volo maty be loatra. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny anaran'ilay Irlandey Wolfhound dia avy amin'ny fampiasana azy ho mpihaza amboadia fa tsy amin'ny endriny. Ity dia karazan-karazany efa tranainy tokoa izay misy ny rakitsoratra romana nanomboka tamin'ny 391 AD. Nampiasaina tamin'ny ady izy ireo, ary ho an'ny fiambenana omby sy fananana ary hihaza elkana, serfa, lambo ary amboadia. Tena nohajaina izy ireo ka ady no nanoherana azy ireo. Wolfhounds Irlandey matetika dia nomena ho fanomezana mpanjaka. Tonga ny lambo sy ny amboadia lany tamingana tany Irlandy ary vokatr'izany dia nihena ny isan'ny mponina Wolfhound Irlanda. Manamboninahitra britanika iray antsoina hoe kapiteny George Graham no nitondra azy ireo tamin'ny tapany faharoa tamin'ny taonjato faha-19. Ny karazana dia naverina tamin'ny laoniny tamin'ny alàlan'ny fampidirana ny Great Dane SY Deerhound ra Ny Irish Wolfhound Club dia natsangana tamin'ny taona 1885 ary neken'ny AKC izany tamin'ny 1897. Tamin'ny 1902 dia natolotra ho an'ny mpiambina Irlanda ho maskot iray ny hound voalohany. Neken'ny Kennel Club ho karazana fanatanjahantena izy io tamin'ny 1925. Ny Irish Wolfhound Society dia natsangana tamin'ny 1981.
IWCA = Irlandey Wolfhound Club of America
Wolfhound Irlandy efa lehibe - Sary natolotry ny David Hancock
Ivan the Irish Wolfhound amin'ny faha-3 taonany— 'Ivana dia manodidina ny 200 lbs. ary 37 santimetatra ny haavony eo amin'ny soroka. Ankizy malemy fanahy tokoa izy ary mahatsiaro sambatra izahay manana azy ao an-tranonay. '
lhasa apso afangaro amin'ny poodle
Ivan the Irish Wolfhound amin'ny faha-3 taonany
Sary natolotry ny Tenderland Farms Texas
Brendan the Irish Wolfhound dia miaraka amin'ny tompony / mpiompy azy, Frank Winters, izay 6 '1' BTW !! Tena mametraka ny haben'ny karazany amin'ny fomba fijery !! Brendan dia manodidina ny 82 kilao (82 kg).
Ity i Grainne miaraka amin'ny tompona / mpiompy Frank Winters. Grainne dia zandrin'i Brendan.
Siela the Irish Wolfhound, sary nahazoana lalana avy tamin'i Genevieve Simmons
Hijery ohatra hafa momba ny Wolfhound Irlandey
Sary Wolfhound Irlandy 1
ambongadiny alika manaikitra
Springer spaniel Basset nanenjika afangaro
basset hound sy mix husky
Basset nanenjika rottweiler Mix alika kely
alika omby aostraliana afangaro amin'ny husky
asehoy ahy ny sarin'ny alika mpiambina voalavo